My World: လူသိရှင်ကြား
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, May 07, 2013 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ, ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
Family Magazine, May, 2013
တစ်ချက်ကလေးမှမမှိတ်ခဲ့ရသေးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာဟာ ခုတင်ပေါ်ကနေ တစ်ရေးထ နိုးတယ်။ ၀ရန်တာမှာ ထွက်ရပ်တဲ့အခါ ကောင်းကင်က သူ့ရဲ့မဟူရာမျက်လုံး တောက်စူးစူးတွေနဲ့ ကျွန်မကို စိုက်ငုံ့ကြည့်နေတာကျွန်မမြင်တယ်။ ကောင်း ကင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကလက်လက်ထ တောက်ရွှန်းနေပေမဲ့ တကယ်တော့ သူဟာ ကျွန်မကို သနားစဖွယ်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ ဟုတ်တယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ကျွန်မဟာ သနားစရာအကောင်းဆုံး မိန်းမ တစ်ယောက်ပဲ။ ဒီနေရာ ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာဒီလို လူ(မိန်းမ)တစ်ယောက် ဒီလို ဖြစ်ပျက်နေလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူ သိကြမှာလဲ။ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။တစ်လောကလုံးဟာ ကျွန်မလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်နှစ်ကာကာကြီး အိပ်မောကျနေကြတာပါ။ အိပ်မက်ကိုယ်စီမက်ရင်းနဲ့လူသားမှန်သမျှ အိပ်မောကျနေမယ့် အချိန်ကြီးပါ။ ကျွန်မ ဘာလို့ မအိပ်ခဲ့ သေးတာပါလိမ့်။
ခက်တယ်။ ကျွန်မပါးပြင်နှစ်ဖက်ကလည်းနေ့ရှိသရွေ့ ညရှိသရွေ့ စွတ်စွတ်စိုလို့။ သုတ်ပေးသူမရှိမယ့် မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့။ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ဥတုရာသီတစ်ခုက ကျွန်မ ပါးပြင်၊ ကျွန်မအရပ်အ၀န်းမှာပဲ ရှင်သန် ပေါက်မြောက်ခဲ့တယ်။ အခုကျွန်မ ဖြစ်ပျက်နေရတာ တွေကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင်မှပြန်ပြီး အံ့အားသင့်မိပါရဲ့။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်မ အခုရပ်နေတဲ့ အိမ်ရဲ့ဝရန်တာဟာ ခိုင်မှခိုင်ရဲ့လားဆိုတာ ကျွန်မ သံသယဖြစ်နေသေးတာပါ။ တကယ်လို့များ မခိုင်ခံ့ခဲ့ရင်ပေါ့။ ကျွန်မဟာ အခု ရပ်နေတဲ့ဒီနေရာကနေ သေချာပေါက် ပြုတ်ကျသွားမှာပဲ။ ကျွန်မခန္ဓာကလည်း တစ်စစီ ကျိုးပဲ့ကြေမွ သွားမှာသိပ်သေချာခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မရဲ့ဝရန်တာလေးရေ…ကျွန်မအတွက်တောင့်ခံပေးထားပါဦးလား။ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုတွေနဲ့ လေးသထက် လေးလံလာတဲ့ ခန္ဓာကို ထမ်းပိုးပေးထားရလို့ မင်းကိုလည်း အားနာလှပါရဲ့။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မအပေါ်မှာကြိုးစားပမ်းစား ရပ်တည်နေရ တုန်း၊ မြဲမြံအောင် ကြိုးစားပြီး ရပ်နေတဲ့ကြားက တစ်ခါတစ်ခါကျွန်မ ရပ်နေတဲ့ ဟောဒီ့ဝရန်တာဟာ ဆတ်ခနဲ၊ လှပ်ခနဲ မြင့်မြင့်သွားပြီး ချီးမွမ်းခြင်းအပြည့်နဲ့ပင့်မြှောက်ချီတင်နေတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်း ကျွန်မ ရပ်နေတဲ့ ဟောဒီ့ဝရန်တာဟာ သိမ့်ခနဲငြိမ့်ခနဲ အိကျသွားပြီး အငြိုးတကြီးနဲ့ ကျွန်မကို ဆွဲယူခေါ်ချနေတယ်။
ညဟာ ရွံ့မုန်းစရာခွေးအူသံတွေနဲ့ ထိတ်လန့်စရာ ညကင်းသံချောင်းခေါက်သံတွေကလွဲပြီး တခြား ဘာအသံမှ ထွက်ပေါ်မနေခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ မြင်သမျှ ကျွန်မ ၀န်းကျင်ပတ်ပတ်လည်မှာ လူတွေ တစ်အုံတစ်ထွေးကြီး ရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူတွေ ကျွန်မ ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ ကျွန်မကို မသိတဲ့ ကျွန်မကမသိတဲ့ လူတွေလေ။ကောင်းကင်ကတော့ ကျွန်မကို ကရုဏာမျက်ဝန်းအစုံစုံနဲ့ စောစောတုန်းကလိုပဲ ပိန်းပိန်းမှောင်မှောင်စိုက်စိုက်ကြည့်နေတုန်းပဲ။
ကျွန်မရဲ့အတွင်းသားနက်နက်ထဲမှာတော့အသံတစ်သံတည်းကိုပဲ အဆက်မပြတ် ရေရွတ်ပြောဆိုနေတာ ကျွန်မကြားတယ်။ ကျွန်မအသံနဲ့တော့ ဆင်တူသလိုလိုပဲ။
ဆင်တူတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်၊ သေချာတယ် ဒါကျွန်မအသံ။ တရွရွလှုပ်ခတ်နေတဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းဝက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အသံတွေဟာကျွန်မရှေ့ ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ထဲထိ တုန်ခါ မြည်ဟီး ပေါက်ကွဲတယ်။ ချုပ်တည်း ချေဖျက်ထားတဲ့ကြားကကျွန်မရဲ့ မုန်းတီးမှုတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဖက်စွန်းထိ ပြန့်ကား တိုးပွားတယ်။ လောလောဆယ်တော့ကျွန်မ ဘာမှ မကြားချင်ဘူး။
“မုန်းစရာပဲ” “သိပ်မုန်းတာပဲ” ဆိုတဲ့ ကျွန်မအသံကလွဲပြီး ကျွန်မဘာမှ မကြားချင်သေးဘူး။
ကျွန်မဟာ သတ္တိဆိုလို့မြူတစ်မှုန်စာမျှ မရှိတော့တဲ့ အရည်အသွေးကျကျ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့အနောက်ကိုလည်း တမ်းတမ်းတတ လှည့်မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အရှေ့ကိုလည်း လင့်လင့်ရည်ရည်မျှော်မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ တည့်တည့်ဆီလည်း စစ်စစ်စီစီ ငုံ့မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ဘယ်ဆီကိုမှ လင့်မျှော်မကြည့်ရဲတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ကျွန်မ အခု ရပ်နေတယ်။
ကျွန်မ အခု ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲ ကျွန်မ ရှိနေခွင့်ရပြီးတော့ ကျွန်မ အခု မုန်းနေတဲ့အရာကိုပဲကျွန်မ မုန်းနေခွင့် ရချင်သေးတယ်။ အသက်ကိုတောင် မရှူမိစတမ်းပေါ့။ အမုန်းစိတ်ဟာ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို ဖုံးလွှမ်းလို့နေတော့တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်မရဲ့အမုန်းတွေ တော်တော်ကြီးကိုများလှတယ်။
ကျွန်မရင်ကိုအေးမြစေအောင် နှင်းပွင့်တွေကို ခြွေမပေးလို့။
၁၃ ဂဏန်းကိုကျွန်မ မုန်းတယ်။
ကျွန်မကိုသိကျွမ်းအောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်လို့။
၅ နဲ့စပြီး၉ နဲ့ဆုံးတဲ့ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကို ကျွန်မ မုန်းတယ်။
ဘယ်တော့မှကျွန်မကို ထွေးထွေးနွေးနွေး ပြန်မဖြေလို့။
ဒါပေမဲ့ကျွန်မဟာ အများကြီးကို မျိုသိပ်စောင့်စည်းပေးခဲ့တာပါ။ အခု ကျွန်မ မုန်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မ ဘယ်လောက် မုန်းနေတယ်ဆိုတာ ခုထိ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောမပြရသေးဘူး။ ကျွန်ကိုယ်ကျွန်မပဲပြောပြရသေးတယ်။ အဲဒီ သိပ်မုန်းတာပဲ သိပ်မုန်းတာပဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ကျွန်မကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့မှိုင်တွေလဲကျသွားစေသလို၊ စိတ်လိုလက်ရ နဲ့ နိုးကြား စေတဲ့ နေ့စဉ်ခွန်အားတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။လူဟာ အချစ်ကို အားပြုပြီး ရပ်တည်ရတဲ့အခါတွေ ရှိသလို အမုန်းကို အားပြုပြီး ရပ်တည်ရတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟော့ဒီဝရန်တာမှာ ဟော့ဒီလို အချိန်အခါတွေမှာပေါ့။
တကယ်ဆိုကျွန်မဟာ မနေ့တစ်နေ့က ကတည်းက ဒါမှမဟုတ် မနှစ်တစ်နှစ်က ကတည်းက၊ ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့၁၃နှစ်ကတည်းက လဲပြိုကျခဲ့ဖို့ ကောင်းတဲ့မိန်းမပါ။ ဒါပေမဲ့ လဲကျမသွားအောင် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မဆက်ရပ်နေပြီး စကားတွေ ခုလို ပြောရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ဖေးမကြည့်ရှုနေခဲ့ရတယ်။
ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်မှုတွေပတ်လည်ဝိုင်းရံတယ်။ အရိုးထဲမှာ နာတယ်။ အဆစ်ထဲမှာ နာတယ်။ စိတ်ထဲမှာ နာတယ်။ခေါင်းထဲမှာ နာတယ်။ ရင်ထဲမှာ နာတယ်။ အရေပြားထဲမှာ နာတယ်။ အတွေးထဲမှာ နာတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ နာ တယ်။ နေ့ထဲမှာနာတယ်။ ညထဲမှာ နာတယ်။ နာပေမဲ့လည်း ကျွန်မ ဆက်လက်ကျန်းမာနေဖို့လိုသေးတယ်။ ကျွန်မ အခုလုပ်လက်စအလုပ်ကို ဆက်ပြီး တက်တက်ကြွကြွလုပ်နိုင်အောင်၊ ကျွန်မ အခု မုန်းလက်စအရာတွေကိုဆက်ပြီး တက်တက် ကြွကြွ မုန်းနိုင်အောင်၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့လိုတယ်။
ပြောရရင်ကျွန်မကို ဘယ်သူကမှ အလိုမရှိသလို ကျွန်မကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ အလိုမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မ လိုချင်တာချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ ချစ်ခင်စုံမက်နိုင်မယ့် လုလင်ပျိုတစ်ဦးပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သူကိုကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ မိန့်မြွက်စကားနဲ့အညီ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြနိုင်မယ့်မိသားတစ်စုပါ။ လောကကြီးက ကျွန်မ မလိုချင်တဲ့အရာတွေကို ကျွန်မဘ၀ထဲ အပိုအဆစ် လာလာထည့်ပေးတတ်တယ်။သူ့ဘာသာ အပိုအဆစ် လာလာထည့်ပေးပြီး ပြန်တောင်းတော့ ကျွန်မ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာတွေထဲကကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု။ အဲဒီတစ်ခုကိုမှ ကျွန်မ ဘ၀ထဲကနေ ပြန်တောင်းဦးမယ် ဆိုတော့ ……ညတွေညတွေ ကျွန်မ အိပ်စက်မရတာ နည်းတောင်နည်းသေးတာပေါ့ကွယ်။
ရှင်သိလား၊ကျွန်မက မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ မိန်းမပီပီအလှအပရေးရာကိစ္စတွေမှာ ထိုက်သင့် သလောက် စိတ်ဝင်စား တယ်။ ကျွန်မရဲ့အလှအပက ယောက်ျားတကာကိုမြှူဆွယ်ဖြားယောင်းကြိုက်ဈေး လိုက်ဈေးခေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ smartကျဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ နေ့အသစ်ရဲ့ရောင်ခြည်နဲ့အတူ ကျွန်မခန္ဓာ၊စိတ်နှလုံး အလုံးစုံမှာ အသစ် အသစ်သောအရောင်တွေနဲ့ တက်ကြွကခုန်နေဖို့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မအလှအပဖြည့်ဆည်းတယ်။ လမ်းဘေးက ဂျာနယ်ရောင်း တဲ့မိန်းမတွေတောင်မှ ဆံပင်တွေဖြောင့်တယ်၊ ကောက်တယ်၊ ဆေးဆိုးတယ်။ခေတ်ကဒီလိုခေတ်။ ရှင် မသိလို့၊ ကျွန်မက သိပ်သနားဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ။ လမ်းဘေးကဂျာနယ်ထိုင်ရောင်းတဲ့ မိန်းမတွေလို beauty saloon သွားပြီး ငွေကုန်ခံ၊ အချိန်ကုန်ခံ ဆံပင်တွေ ဖြောင့်၊ ကောက်၊ ဆိုးတာ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အကုန်အကျနည်းတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသာ လှအောင်နေထိုင်တယ်။ မျက်လုံးခြယ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းဆိုးတယ်။လက်သည်းခြေသည်း ဆေးဆိုးတယ်။ ဒါလောက်ပဲ။ အဲဒါဘာဖြစ်လဲ...မိန်းမတစ်ယောက်က မိန်းမပီပီလှအောင်နေတာ ဘာဆန်းလဲ။ ခက်တာပဲ။ ကျွန်မမှာ လူသိ ရှင်ကြား အလှပြင်ခွင့်မရဘူး။ မိန်းမတစ်ယောက်ကမိန်းမပီပီ မိန်းမရေးရာ ကိစ္စလေးမှာတောင် လူသိရှင်ကြား လုပ်ခွင့်မရတာ လောက် လူ့အခွင့်အရေး(woman'sright)ဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ် မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မဟာ ဟောဒီကမ္ဘာမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံးလူမိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ ဘာမဆို လူသိရှင်ကြား မလုပ်ရဲခဲ့ဘူး။
လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရဘူး။ လူသိရှင်ကြား ပွဲလမ်းသဘင်ဆင်နွှဲခွင့် မရဘူး။ လူသိရှင်ကြားတေးသီကျူးခွင့် မရဘူး။ လူသိရှင်ကြား ကခုန်မြူးထူးခွင့် မရဘူး။ လူသိရှင်ကြား စားသုံးဖြည့်တင်းခွင့်မရဘူး။ လူသိရှင်ကြား စီမံ ချက်ပြုတ်ခွင့် မရဘူး။ လူသိရှင်ကြား ရယ်မောပျော်ရွှင်ခွင့်မရဘူး။လူသိရှင်ကြား… လူသိရှင်ကြား………. လူသိရှင် ကြား……….။ ဘာမဆို ကျွန်မမှာ တိတ်တဆိတ်လေးပဲ။ညတွေညတွေမှာတောင် ငြိမ်ဝပ်နေပြီးသား ကိုယ်ခန္ဓာကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ ထပ်ဆင့်ငြိမ်သက်လို့။မှိတ်ပြီးသား မျက်လုံးကို ထပ်ကာထပ်ကာ ထပ်ဆင့်စုံမှိတ်လို့။ တိတ်သထက် တိတ်ဆိတ်စွာ ကျွန်မအိပ်နေခဲ့တယ်။
စေ့စေ့သေချာတွေးကြည့်မိတဲ့အခါကျမှ လူသိရှင်ကြား လုပ်ခွင့်ရတဲ့အရာဆိုလို့ ကျွန်မမှာ တစ်ခုတော့ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ်။ လူသိရှင်ကြားလုပ်ခွင့်ရတဲ့ အဲဒီနည်းကို သိလိုက်ရလို့ ကျွန်မပျော်သွားတယ်။အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာဖြစ်မလဲ။ ရှင်သိလား။ အဲဒါ “ သေဆုံးခြင်း ”ပဲ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မမှာ လူသိရှင်ကြားလုပ်ခွင့်ရတာဆိုလို့ "သေဆုံးခြင်း"ပဲရှိတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့သမီး၊ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့ဇနီး စသဖြင့် လူသိရှင်ကြား သေဆုံးခွင့် ကျွန်မမှာ မကြာခင် ရလာ တော့မှာပါ။ကျွန်မဟာ လူသိရှင်ကြား သေဆုံးခွင့်နဲ့အတူ တစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွေရဲ့စာမျက်နှာတွေ ပေါ်ကနေ လူသိရှင်ကြား နာရေးကြေညာခွင့် ရလာမှာပါ။
အခုဆိုကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အရိုးအဆစ်တွေက မုန်းတီးခါးသက်နာကျင်ခြင်းနဲ့အတူ ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ်ညည်း တွားသံပြုလို့ မြည်တမ်းပေါက်ကွဲနေကြပြီ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အက်ကွဲ ဆူညံ တုန်ယင်လာကြပြီ။သေဆုံးခြင်းက သေဆုံးခြင်းက တခြားသူအတွက် ဘယ်လို ရှိမယ်မ ကျွန်မ မသိ။ ကျွန်မအတွက် တကယ်တော့ဘာမှ အဆန်းတကြယ် မရှိလှ။ ပြီးတော့ ကျွန်မအတွက် သိပ်ပြီးတော့လည်း ခက်ခဲလှမယ် မထင်။ လောကရဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုမှတော့ ကျွန်မ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လိုက်လျောခွင့်ပြုဖို့ပဲပြင်ဆင်ရတော့မှာပေါ့။
ဒီဘ၀ကြီးထဲမှာကျွန်မကို ငြင်းဆန်ခဲ့တာတွေရော၊ ကျွန်မက ငြင်းဆန်ခဲ့ရတာတွေရော မချိမဆံ့အောင် များပြားဆို့နင့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ကြိမ်လေးသာ ကျွန်မ အသာတကြည် လိုက်လျော သေဆုံးရမှာပါ။
မောင်ရေ…..ကျွန်မတို့ဘာကို စားသုံးခဲ့မိပါလိမ့်။ တကယ်ဆို ကျွန်မတို့ ဆာလောင်နေတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးက ခုထိကျွန်မတို့ ဘ၀ထဲကို ကြွေကျမလာခဲ့ဘူးနော်။
ရိုင်းလီ ကို ရှာဖွေခြင်း
ဥမင်ဆိပ်ကမ်းမြို့တော် "နေပယ်လ်" ကိုသွားကြမလား
End it like Beckham !
ညစ်ထေးတဲ့စစ်ပွဲအလွန် ကောင်းသောခရီးဆီ ခြေလှမ်းဆက်မည...
ရွေးချယ်စရာအများသား .. မယ်လမင်းမဟုတ်တဲ့ တခြား
ဆရာပါရဂူ ၏ မင်းနှင့်ပြည်သူ စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်...